မြောက်ဥက္ကလာက အသက်(၉၀) ကျော် အဘိုး၊အဘွားလင်မယားကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ နေဒွေး - Cele Gabar
By RainowPosted on July 18, 2020 July 18, 2020
ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုဘိုးဘွားများကို မိမိတို့၏အဖိုးအဖွား မိဘကဲ့သို့ ကိုယ်ချင်းစာတရားဖြင့် ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ နဲ့ အခုလိုကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကျရောက်နေချိန်မှာ မပြည့်စုံတဲ့သူများကို ပြည့်စုံတဲ့သူများက #မျှဝေကူညီကြပါစို့ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…. အားလုံး(၇)ရက်သားသမီးစုပေါင်းအလှူလေးပါခင်ဗျ…. နောက်လများတွင်လည်း ထပ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမပြည့်စုံတဲ့အဘိုးအဘွားများကိုရှာဖွေလှူဒါန်းသွားပါဦးမည်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အလှူလေးကို မျှဝေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ မွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ အဘိုးအဘွားတွေအတွက် စဉ်းစားပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ နေဒွေးနဲ့ Naymily လေးတွေရဲ့အလှူအတွက် သာဓုခေါ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
Previous post လမ်းပေါ်က ပန်းရောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေကို ပီဇာတွေ ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ ဆီနွန်
Next post အောင်ရဲထိုက်နဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်းတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရာဝနရဲ့ မျက်ရည် သီချင်း Music Video